Yaa damaanad qaadaya amniga Ergada? | KEYDMEDIA ONLINE
Yaa damaanad qaadaya amniga Ergada?
Ciidamada Dowlada iyo Xoogaga Amisom ee kaaba, ayaanan iyagu damaanad buuxda oo lagu xaqiijinayo amnigooda siin karin, waana tan keeneysa wal walka joogtada ah ee ay dariska la noqdeen.
MUQDISHO, Soomaaliya - 101 ergo ayaa lagu wadaa in ay doorato Xildhibaan kasta oo kamid noqonaya Baarlamaanka 11-aad, kuwaasoo wadnaha farta ku haya oo cabsi xooggan ka muujinaya digniintii Al-Shabaab, ee ahayd in cid walba oo ka qeyb qaadata doorashadda ay dili doonto.
Waxaa todobaadka soo aaddan sida qorshuhu yahay la filayaa in la guda galo doorashadda Golaha shacabka, taasoo saldhig u ah in 101 ergo oo ka yimid jufada kursiga isla leh ay doortaan musharaxiinta u tartameysa kuraasta.
Ergada oo ah kuwa isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada, ayaa wajihi doona caqabado amni oo kaga imanaya Al-Shabaab, iyadoo xusid mudan tahay in inta badan ergadii hore la dilay, halka kuwii harayna Al-Shabaab iska soo diiwaangeliyay sanadkii tagey.
Xubno badan oo la qorsheynayey in ay ka mid noqdaan ergada, ayaa iska diiday xubin ahaanshahooda, kadib fariimo handadaad ah oo ay ka soo gaaray Al-Shabaab, sida Keydmedia Online u xaqiijiyeen illo ku dhaw gudiga doorashadda.
Ciidamada Dowlada iyo AMISOM, ayaanan iyagu damaanad buuxda oo lagu xaqiijinayo amnigooda siin karin ergada, waana tan keeneysa wal-walka joogtada ah ee ay dariska la noqdeen.
Qorshahan lagu kordhinayo tirada ergada ayaa waxaa dejiyey Hoggaanka Villa Somalia iyo Taliyihii hore ee NISA Fahad Yasin oo lagu tuhmo yahay inuu gacan saar la lee yahay Al-Shabaab.
Ergadan oo ka badan ergadii soo xushay Baarlamaankii 10-aad ayey dhaqan galinta qorshihiisa Villa Somalia u arkeysay mid ay kaga duwanaan karto doorashadii dhacday 2016, isla markaana u noqon kara libin ay ku faani karaan, balse ififaalaha muuqda waa mid horseedi kara falal amni darro iyo fashil soo deg dega.
Qubarada dhanka amniga ku xeel dheer ayaa tilmaamaya in kordhinta ergada ay ballaarineyso dhibkii amni xumo ee jiray, maadaama la xaqiijin waayey amniga eragadii iyaga ka horeysay, kuwaasoo aad uga tira yaraa kuwa hadda lagu wado in ay soo xulaan xubnaha Baarlamanka 11-aad.
Ergada ayaa ah kuwa aanan heleynin dhaqaale ku filan oo ka caawiya in ay ka taxadaraan amnigooda, waana kuwa u nugul xaalad kasta oo qatar ku ah naftooda.
51-dii ergo ee soo xulay Xildhibaanadii hore, ayaa la kulmay falal lidi ku ah amnigooda, waxana qaarkood ay ku geeriyoodeen dilal qorsheysan oo ay mas'uuliyadooda sheegatay Al-Shabaab, halka kuwa kala looga yeeray degaannada kooxda maamusho.
Qaar badan oo ka mid ah ergadii dooratay Baarlamaankii 10-aad ayaa ka soo muuqday Warbaahinta afka Shabaabka ku hadasha, iyagoo ka qoomameynaya kaalintoodii doorashadii 2016-kii dhacday, islamarkaana cafis weydiisanaya Kooxda dagaalka kula jirta nidaamka dawladnimada Soomaaliya.